SPS-FGB Fiber Glass Board squeegee - Shiinaha ChangZhou Plet Daabacaadda
Inkastoo dhac guud ee dhaqaalaha sanadka 2015, laakiin warshadaha screen daabacaadda weli gaareen natiijooyin wanaagsan, ee sanadkan, inta badan shirkadaha daabacaadda shaashadda sidoo kale iyada oo ayna soo saarka, isdhexgalka khayraadka iyo Isbadal kale, ayaa rajeynaya in aan ka faa'idaysto meelaha amar industry ee, kaas oo sidoo kale kor u qaadaan The horumarinta warshadaha daabacaadda shaashadda. Waqtigan xaadirka ah, daabacaadda shaashadda ayaa sii fiicnaaday iyo in la hagaajiyo labadaba technology qalabaynta, technology hubinta tayada, iyo in heerka qalab iyo qalabka wax soo saarka.
In horumarka warshadaha screen daabaco, Daac, baaraan screens daabacaadda, iyo makiinado lacagta lagu daabaco inta badan walaac waa. Si kastaba ha ahaatee, dad tiro yar ayaa xiiso u daabacaadda shaashadda iyo squeegee. Si kastaba ha ahaatee, squeegee ka ciyaaraa door muhiim ah ka fineness iyo xasiloonida daabacaadda. Doorka. Changzhou Preet Daabacaadda Technology Co., Ltd. (loo soo gaabiyo "Platt") waa qeybiye xirfadeed ee la isticmaalo daabacaadda shaashadda. Under ay cilmi iyo shaqo daalin, SPS qiray Daabacaadda Screen iyo squeegee ayaa si tartiib tartiib ah ku guuleystay aqoonsi oo ka mid ah suuqa iyo warshadaha. Waxay jeelyihiin in caanka ah. In 2016, waxyaabaha ugu muhiimsan ee Pratt waa Maro adag SPS-FGB xoqid iyo SPS-FGB-AS fiber carbon xoqid antistatic.
Faa'iidada ee SPS-FGB Maro adag xoqid waa in guddiga fiber muraayadda taageertaa xabagta xoqid ah. Xitaa haddii xabagta ku xoqid waxaa lagu qooyay khad ah oo wakhti dheer ah, daabacaadda aan si fudud doorinaynaa. Sidaa darteed, SPS-FGB guddiga fiber galaas xabagta ku xoqid siin kara cadaadiska daabacaadda deggan. , Xagal daabacaadda ee joogtada ah, iska caabin abrasion sare iyo iska-caabbinta dareeraha, ku haboon warshadaha daabacaadda shaashadda sax sida khadadka wanaagsan, daabacaadda dhibic, iyo gacanta oo dhumucdiisuna waxay filimka, sida: screen taabashada daabacaadda madow iyo caddaan screen cover, taaban shaashadda TP lacag ah gacanta ku dhumucdiisuna film (badbaadinayo 8% nab Silver), Home Appliance Qurxinta Industry Color Transparent & Dot Daabacaadda, Home Appliance Qurxinta Industry Pearl Powder Daabacaadda (Screen Daabacaadda Easy Si khad), Automobile Dashboard Industry Xoqin Daac Oo Transparent Color Daabacaadda, Guide Light Plate Industry Dot Daabacaadda, Label RF Superfine Silver line daabacaadda, looxaanta daabacaadda line Roobka iyo wixii la mid ah.
SPS-FGB-AS fiber carbon squeegee anti-guurto ah ma aha oo kaliya uu leeyahay qaab ciyaareed buuxa ee Maro adag FGB squeegee, waxa ay sidoo kale sii daayo kartaa koranto ma guurto ah ahbaa inta lagu guda jiro geeddi-socodka daabacaadda. Maxaa yeelay,-SPS FGB-AS fiber carbon anti-Kenia xabagta xoqid ka samaysan yahay guddiga fiber carbon tabinta iyo anti-Kenia AS xoqid xabagta, AS xoqid caag si guul ah waxay yarayn kartaa qiimaha caabin xoqid 10 MΩ, kaas oo lagu sii daayo inta lagu guda jiro daabaco geedi socodka. korontada ma guurto ah, si looga fogaado in raasamaal electrostatic geedi socodka screen daabacaadda iyo ifafaale ee ay barbaro galeen iyo duulaya khad, kaas oo sidoo kale si weyn kor loogu qaado tayada sheyga.
Tayada siinayaa diirimaad sheyga, tarjumayaa dabeecadda ee shirkadda, iyo sidoo kale faa'ido u tahay horumarka shirkadda. Waayo, tayada wax soo saarka, Prete si adag gacanta ku alaabta ceeriin, wuxuu qaadanayaa geedi-soo-saarka sayniska, iyo fulinaya nidaamka baaritaanka adag. Marka laga eego dhinaca saamiga suuqa, istaraatijiyad Pret ayaa ku guulaysatay natiijooyin aad u wanaagsan. Laakiin ma hub culus Pret ayaa waxaa ku koobnayn this. In Zaman oo waayo aragnimo ah adeeg-u janjeedha, Pretto dhigeysa adeegga ugu horeysay ee horumarinta ganacsiga, oo uu leeyahay shabakad marketing dhamaystiran iyo pre-iibka iyo nidaamka adeegga ka dib-iibka. Online pre-iibka tashiga farsamo la fulin karaa ka channels labada online iyo offline, iyo qorshayaasha u habaynta iyo adeegyada simayo ka dib-iibka waxaa laga heli karaa inta lagu guda jiro sale, si ay u qanciso shuruudaha macaamiisha inta ugu badan ee suurtogalka ah. mission Pratt ee: hordhaca ah ee screen Xariir daabacaadda waxyaabaha cusub, hababka cusub, iyo kor u qaado horumarka of warshadaha screen Xariir.